Paarteleen Mormitootaa Naannoo Afaar Komii Dhiheesan
Faayilii - Wiirtuu Filannoo
Filannoo Itiyoophiyaa isa marsaa 6ffaa irratii kan hirmaataa paartileen naannoo Afaar adeemsaa fi bu’ii filanichaa irratii komii kaban dhiheesaniiru.
Paartiin Adda Bilisabaasaa Afaar, Adda tokkumaa Waraaqisaa Dimokiraatawa Afaar, partii saba Afaar, paartii haqaawaa fi dimokiraatawaa saba Afaar, akkasumas sochii dimokiratawa sab lammii Argobba ta’uudhaan ibisaa Finfinnee keesatii gaazexesootaaf kenaanini komii isaanii ibsan.
Miseensi mana maree paartilee kana Abbo Muusaa Adem akka VOAti himanitii, filanoo keesaa kan galamee ittuu qophaa’insii gahaan hin jiraatin fi ittuu qaawaan adda adda jiruu ta’uu isaa himanii, yemuu galmee filatootaa kaaridiin gahaan filattootaf akka hin kenamineef dabbaloonii paartii biyya bulchaa jiruu offi isaanii kaardii qabatani , guyya filanoo akka manaaf hiraa turaan dubbataniru.
Guyaa falannoo namoonii hedduun al tokkoo caalaa deddebi’anii sagalee kenna akka turani fi taajabdoonii paartii mormiitootas akka hari’aman Obbo muusaan himaniiru.
Boordiin Filannoo biyyoolesaa filannicha ilaalchisee ibsa gidduu kana kenneen buufataa filannoo 46 keesaa 30 irratii komiiniif iyyannoon dhihaachuu isaa ibsee koniim paartilee afaarisi akka qoratamu dubbachuu isaanii gabaasaan VOA Masini Araagee gorsiituu dhimma sab quunamitii boordichaa soliyaanaa shimalis caqasuudhaan gabaaseera. Dhima kan irratii haanga’oota Mootummaa naannoo Afaar haasofsiisudhaaf yaaliin godhamee akka hin milkoofneefi fuladuratti yaadin isaanii yemuu argamu akka keesumeefamuu Masifin Araagee gabbasa kana keessanii ibseera